WAA MAXAY BOGSIGA BOGSIGA: FAA'IIDOOYINKA IYO DAAWOOYINKA KALE EE LOO ISTICMAALO - DAAWADA DADWEYNAHA
Ledum rosemary - warshad qashin ah oo qashin ah oo ka tirsan qoysaska heather.
Ledum badanaa wuxuu ku baxaa Yurub, North America iyo Aasiya. Warshadu waxay leedahay qaabdhismeedka baadiyaha oo xoog leh oo gaadhaya heerkul aan ka badnayn 120 sentimitir.
Carafka duurka duurjoogta duurjoogta ah aad buu u egyahay urka xayawaanka. Duufaantarku waxay u egtahay inay aad u adag tahay in lagu kariyo carafo in ay halis u tahay caafimaadka si ay ugu dhowaadaan duurka inta lagu jiro ubax.
Ma taqaanaa? Dadka ku jira ceelka rosemary duurjoogta ah waxaa sidoo kale loo yaqaanaa Bakhun, Bagunnik, bugun, xujo, qulqulatada qulqulaya, qiiqa dabka, shimbirta cawliga ah, kufsiga weyn, nacabka hurdiga ah, rosemary kaynta iyo cayayaanka.
Da'yar aan caan ahayn oo aan lignignified ee shaaha labrador Labrador waxaa lagu daboolay finan cas. Caleenta dhirta waa maqaar, qulubsan, qoyan. Inta lagu jiro xilliga ubax, dhirta waxaa lagu daboolay ubax cad oo la ururiyey dhamaadka laanta galka dalladaha. Miraha Bagulnik waa sanduuqyo-qoryo-qoryo-qoryo-qoyan.
Waxyaabaha kiimikada ee kiimikada duurjoogta ah
In halabuurka ee warshad waa la joogaa saliidaha lagama maarmaanka ah oo ay ku jiraan baraf, η-cymol, palustrol, khamriga baaskiilada, hydrocarbons iyo geranl acetate. Marka laga reebo xididada, saliida lagama maarmaanka u ah dhammaan qaybaha duurjoogta duurjoogta ah.
In caleemaha warshad ee sanadka ugu horeeya ee nolosha, saliiddu waxay ka kooban tahay 1.5 ilaa 7.5%, iyo caleemaha duurka ee sanadka labaad - laga bilaabo 0.25 ilaa 1.4%, in laamaha sanadka ugu horeeya - laga bilaabo 0.17 ilaa 1.5%, ee laamihiisa sanadka labaad ee qadar aan ka badnayn 0.2%, ubaxyada - qiyaastii 2.3%, iyo miraha - ilaa 0.17%.
Saliida lagama maarmaanka ah ee bogwortaha duurjoogta ah waxay leedahay dhadhan qadhaadh ah iyo ur adag oo balsamic ah.
Waa muhiim! Waqtiga ubaxa, dufka duurjoogta ah ayaa u dhintaa caafimaadka dadka, sababtoo ah waqtigan geedka ayaa sii deynaya maaddooyinka sunta leh ee sunta ah ee sunta ku sumooba, taas oo keenta madax-xanuun daran.
Intaa waxaa sii dheer, dhirta waxaa ku jira glycosides (arbutin iyo ericolol), coumarins (scopoletin, esculin, umbelliferone, esculetin), andromedotoxin, flavonoids (hyperoside iyo quercetin), phytoncides, fareeshka iyo waxyaallaha midabka, fitamiin C, iyo liis cajiib ah ee macro- iyo walxaha raadraaca.
Wanaajinta sifooyinka dabiiciga ah ee duurjoogta
Aan fiirino faaiidooyinka ledum iyo cudurrada ay soo dhaweyntu ku badbaadin karto qofka. Markaad isticmaasho warshad, xasuuso in wax walboo qiyaastoodu tahay - faa'iido iyo waxyeello, sidaas awgeed sunta sunta waxay labadaba daaweyn kartaa qofka oo dila.
Qalabka dawooyinka ee rosemary duurjoogta Bogulnik waxay si toos ah ugu tiirsan yihiin qadarka saliidda muhiimka ah ee ku jira. Heerka sare ee saliidda lagama maarmaanka ah, ayaa sare u kacda awoodda bogsashada ee geedka.
Gaar ahaan caan waa daaweynta boronkiitada leh rosemary duurjoogta ah, sababtoo ah marka loo isticmaalo gudaha warshad, walxaha aan sugnayn ee ku jira qeybtooda waxay si dhakhso ah u galaan sanbabada waxayna kicinayaan dhaqdhaqaaqa mashiinka epithelium, kaas oo gacan ka geysta gargaarka degdegga ah ee cudurka.
Ma taqaanaa? Nidaamka lagu naqshadeeyo maadada bakteeriga, maadooyinka noolaha ee firfircoon ee firfircoon waxay leeyihiin saameyn deg deg ah oo xannibaad ah oo ku dhaca xuubka neefta, kaas oo kordhiya dheecaankiisa iyo dhaqdhaqaaqa hawada ee epithelium oo ku xidhan mareenka neef-mareenka.
Khabiiradu sidoo kale waxay xusuusnaan doonaan in rosemary duurjoogta ahi ay saameyn weyn ku leedahay antispasmodic on muruqyada siman ee brononka. Intaa waxaa dheer, dhirta ay leedahay saameyn ah anti-bararka, taas oo sidoo kale ka qayb qaadataa in laga takhaluso boronkiitka.
Waxaa loo isticmaalaa daaweynta saliidaha, saliidaha, budada iyo tincture ee rosemary duurjoogta ah ee dabaylaha. Daawada dhaqameed, isticmaal daroogada "Ledin", oo lagu sameeyey saldhigkan iyo haysashada waxyeello ciriiri leh iyo saameynta bronchodilator.
Saliida Ledum ee lagama maarmaanka ah waxay leedahay saameyn kicinaysa habka dhexe ee neerfaha. Sidoo kale, dhirta ayaa leh saameyn dheceysa. Saliidaha aasaasiga ah ee ka samaysan geedka ayaa ka soo baxa kelyaha kaadida oo leh qaab aan isbeddelayn, taas oo sharaxaysa saameynta wanaagsan ee xubnaha kaadida ee saliidaha muhiimka ah iyo arbutin glycoside. Ledum marsh wuxuu leeyahay saameyn la taaban karo.
Cunnooyinka daawada dhaqameed: daaweynta kororka duurjoogta cudurada kala duwan
Inkasta oo ay jirto joogitaanka qeyb ka mid ah walxaha walxaha dufanka dufanka dufanka duurjoogta ah, waxa ay dawooyinkooda heleen codsi ballaaran oo daaweyn dhaqameed. Sababtoo ah, dhirta waxaa si firfircoon loo isticmaalaa daaweynta cuduro kala duwan.
Maaddaama la isticmaalay alaab caan ah ubaxa, caleemaha iyo lafaha duurka. Tincture iyo decoction ee rosemary duurjoog waxay leeyihiin wax soo saarka iyo hantida hodanka ah ee u oggolaanaya isticmaalka ee daaweynta adag ee boronkiitada, tracheitis, xiiq-dheer, qaaxada, neefta iyo laryngitis.
Intaa waxaa dheer, dhirta ayaa xaqiijiyay laftiisa ee daaweynta cudurrada noocan ah ee nidaamka muruqyada, sida laabotooyinka, arthritis-ka iyo arthrosis deformans.
Sidoo kale laf-dhabarka duurjoogta ah waxaa loo isticmaalaa qeyb ka mid ah daaweyn adag. ee daaweynta sonkorowga, cirbadeynta suuxdinta, dysentery, scrofula iyo canbaarta, iyo sidoo kale diaphoretic aad u fiican, dheecaan, jeermis dilaha iyo wakiilka dhiigga.
Waa muhiim! Marka la daaweynayo warshad, waxaa lagama maarmaan ah in ay noqoto mid aad u xiisa badan, maadaama aan loo hoggaansamin qiyaasta daawada waxay keeni kartaa cawaaqib aan loo baahnayn. Waa maxay macdanta qatarta ee Ledum? Waxyaaba waa in tani ay tahay warshad sun ah, sidaas darteed isticmaalka qaladka ah wuxuu keeni karaa dhaawac aan loo baahnayn oo jirka ah. Ha isticmaalin qalabka gawaarida duurjoogta ah adigoon dhakhtar qorin.
Hoyga, rosemary waxaa loo isticmaalaa sida cayayaanka: waxay fumigate qolalka, qurxin dhirta leh decoction meelo halkaas oo qadhaadh, kaneecada iyo duqsigu ururiyo. Lafaatiirta ama budada duurjoogta duurjoogta ah si ay uga hortagaan muuqaalka baalalka. Iyo saliidka lagama maarmaanka ah ee rosemary duurjoogta ah oo lagu qasi karo maqaarka maqaarka.
Ma taqaanaa? Dhirta duurjoogta ah ee duurjoogta ah ee loo yaqaan 'boogta' ee loo yaqaan 'doves' ayaa la isku dayey in la isticmaalo boodhka, laakiin tijaabadu way ku guuldareysatay sababtoo, inkastoo xaqiiqda ah in cabitaanka khamrigu u eg yahay midda la mid ah, waxay lahayd hanti aad u sarreeya, iyo, ka sokow, waxay keeneen madax-xanuun daran, delirium iyo calool xanuun.
Geedka waxaa loo isticmaalaa si firfircoon ee loogu talagalay daaweynta xayawaanka. Guryaha waxaa lagu waraabiyaa maraq dufan dufan ah oo loogu talagalay colic opoy, oo ah lo'da waxaa la siiyaa barar, iyo doofaarka si looga hortago caabuqa cudurada faafa inta lagu jiro cudur faafa. Ku dhowaad dhammaan xayawaanka guryaha, marka laga reebo riyaha, caleemaha Ledum waxay leeyihiin saameyn xun.
Inkasta oo ay jiraan suntan sumaysan, warshadu waxay leedahay saameyn taariikhi ah oo ka soo horjeeda, kaas oo u oggolaanaya isticmaalka daaweynta walxaha xasaasiyadda ee neefta neefta, cambaarta iyo dermatitis.
Daaweynta nidaamka muruqyada, waxaa loo isticmaalaa boomaatada dufan ee duurjoogta ah, taas oo ay leedahay saameynta anti-bararka iyo xanuunka.
Shaaha ka soo jeeda duurjoogta duurjoogta ah
Shaaha ka soo jeeda duurjoogta duurjoogta ah - Tani waa daaweyn wax ku ool ah ee qufac aan qallafsaneyn iyo neefta oo gaabis ah, taas oo loo isticmaali karo dadka waaweyn iyo carruurta. Waa lagama maarmaan in la qaato daawadan mudo dheer - laga bilaabo 2 ilaa 4 asbuuc.
Si loo gaaro saameyn ku daweyn, dadka waaweyn waa inay cabaan cabitaan nus saddex jeer maalintii, carruurta waa in la siiyo hal shaaha oo aan ka badnayn saddex jeer maalintii.
Samaynta shaah ma qaadan waqti badan. Hal qaado oo caws ah oo qallalan oo dufanka duurjoogta ah ee biyaha qulqulaya ayaa lagu shubay galaas biyo ah oo karkaraya oo loo oggol yahay inay soo dhajiso 15 daqiiqo. Si kor loogu qaado waxtarka daaweynta, waxaad ku dari kartaa hal shaaha oo ah caleemo nadiif ah oo caano ah.
Saliida rosemary duurjoogta duurjoogta sameeyey saldhig saliid saytuun ama saliid gabbaldayaha: hal qaado oo ah geedo la jarjarey 100 ml oo saldhig ah. Buuxi cawska saliidda oo markabka ku rid meel gudcur ah 21 cisho.
Si loo hagaajiyo geedi socodka, waxaa lagama maarmaan ah in saliid la gooyo cawska ugu yaraan hal mar maalintii. Waqti ka dib, saliidda waa in la miiro oo ku shubaa weel mugdiga ah. Daawada waxaa loo isticmaali karaa in lagu duro sanka oo la yiraahdo rhinitis-da dillaaca ama sinusitis.
Cuntada ka kari mulkiilaha duurjoogta wuxuu noqon karaa mid kale. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan doontaa inaad qaadato 1 qaado oo ubax ah oo ubaxyo ah oo duurjoogta ah ku shub 100 ml oo ah gabbaldaye ama saliid saytuun ah. Weelka waa in lagu rakibaa dabka, u qaado karkari oo isku kari ilaa hal daqiiqo ka badan kuleylka hooseeya. Weelka ka soo saar kuleylka oo cambaareyn, sii diyaargarow 24 saacadood oo kale, daadi.
Saliidda waxaa lagu xannibayaa gobolka lumbar leh radiculitis-ka ama isgoysyada arthritis-ka ama qabsashada arthrosis, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa miyiriska iyo neuralgia-intercostal.
Haddii aad subag ka sameysid rosemary duurjoogta ah ee loogu talagalay buug-yarahan, ka dibna waxaa loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo finan, cambaar iyo lichen. Iska ilaali 2 qaado oo ah geedo la jarjarey oo lagu daboolo weel oo ku dabool 5 qaado oo saliid ah gabbaldayaha. Awoodda in la xiro oo la dhigo saacadda 12aad meel diiran.
Ledum salaysan ee saliidda, waxay gargaar ka gaystaan ​​xanuunka arthritis-ka, arthritis-ka iyo radiculitis-ka, waxay xanuujineysaa xanuunka neuralgia iyo myositis.
Si aad u diyaargaroobo cadarka dufanka duurjoogta ah, Waxaa lagama maarmaan ah in la qaato 200 g oo dufanka hilibka doofaarka ku jirta oo ku rid dheriga dhoobada, ku dar 25 g caleemo la jajabiyey, daboolka weelka daboolka leh oo ku rid foornada si aad u kariso laba saacadood 100 ° C
Caddayn yar oo qabow, daadi oo ku shub weel dabool leh dabool leh iyo qoorta ballaaran. Waa in lagu keydiyaa qaboojiyaha.
Daaweyn fiican oo loogu talagalay isnadaamiska ayaa la tixgeliyaa boomaato leh roogga duurjoogta ah iyo xididada hellebore. Qaado qaado oo ah geedo yaryar oo ah duufaan iyo duufaan duurjoog ah oo ku dar 500 g oo ah dufanka doofaarka. Ku rid weelka 12 saacadood ee foornada oo isku kari ilaa kulaylka yar. Ka dibna adkee baruurta iyo ku shub weel dhalada ah. Saliidayn aagagga ay saameeyeen 3 jeer maalintii.
Faleebo qoyan oo dufan ah
Faleebo qoyan oo dufan ah wuxuu leeyahay boogaha bogsoon ee sarreeya. Waa wax ku ool ah nabarrada dillaacsan iyo burqada, qabow, gubasho, cambaarta iyo qaniinyada cayayaanka. Waa inaad qaadataa 2 qaado oo ah caleemaha dufanka duurjoogta ah kuna shub hal galaas oo biyo karkar ah, ha diyaargaroobaan 45 daqiiqo, ka dibna adkee oo soo qaado 500 ml oo biyo nadiifa ah.
Si aad u karisid faleebo duufaan duurjoog ah, Waxaa lagama maarmaan ah in lagu shubo 12 g oo caws oo leh galaas oo biyo karkaraya ah una diyaari 20 daqiiqo. Faleebo waxay xirtey isbitaallada ay saameysey ee leh arthritis, arthrosis, turki iyo radiculitis.
Cunto karis kale oo caan ah galinta isticmaalka gudaha loo isticmaalo sida wakiil prophylactic inta lagu jiro epidemics of ARVI, hargabka iyo rhinitis daran. Shub 20 g oo caws oo leh hal litir oo biyo ah karkaraya iyo kariyo foornada ilaa 10 saacadood. Cab hal decoction waa inuu ahaado saddex koob oo saddex jeer maalintii.
Tincture khamriga ee dufanka duurjoogta ah
Tincture khamriga ee dufanka duurjoogta ah Waxaa loo tixgeliyaa daaweyn heer sare ah oo loogu talagalay gout, laabotooyinka, arthritis, canbaarta, iyo sidoo kale boronkiitada, neefta neefta. Intaa waxaa dheer, natiijooyinka aadka u fiican waxaa la siiyaa daaweyn leh barar duurjoog ah oo ku dhaca xiidmaha yar yar iyo xiniinyaha.
Si loo sameeyo faleebo, buuxi shan qaybood oo vodka ama aalkolo hal qayb oo ka mid ah cawska la jajabiyey ee rosemary duurjoogta ah ee marshaxa. Markaas waxaad u baahan tahay inaad ku adkaysato daroogada meel diiran oo madow ilaa 24 saacadood. Tincture waxaa loo istcimaalaa si qunyar ah si loogu qulqulo qaybaha la isku dhufto ama dhabarka. Qashinka oo si fiican u suuxiya oo yareeya barar.
Maraq duufaan duurjoog ah
Maraq duufaan duurjoog ah inta badan waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo xubnaha neefsashada, wadnaha, iyo habka urojiinka. Daawada waxaa lagula talinayaa inay qaadato 0.5 koob 3 - ugu badnaan 4 jeer maalintii maalintii 1 ilaa 2 bilood.
Kusaabinta maraq dufanka duurjoogta ah ma qaadan waqti badan. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan doontaa inaad qaadato 1 qaado oo ah caleemaha la jajabiyey ee geedka iyo ku shub hal hal galaas oo biyo ah, kari mari daroogada ilaa 15 daqiiqo biyo wata, ka dibna u diyaari 45 daqiiqo oo kale. Ka dib markii faleebo la faafiyo, adkee.
Ururinta daroogada oo leh dufan duurjoog ah
Lacagta dawooyinka ayaa caan ka ah tan marka la qaato wax geedo ah. Xaqiiqdu waxay tahay in uruurinta dhirta daawooyinka ay leeyihiin saameyn ballaaran, taas oo u ogolaanaysa in ay ku guuleystaan ​​natiijooyin wanaagsan oo daaweyn ah.
Wixii daaweynta dysentery waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo faleebo 10 g oo ah rosemary duurjoogta ah iyo 20 g of xididka Althea. Buuxi ururinta xawaashka leh 1 litir oo biyo ah karkariyo isla markaana taariikhda waxaa la soo qaadayaa 60 daqiiqo. Qaado ururinta dysentery waa inay noqotaa laba saacadood, mid waliba hal qaado.
Qufac qalalan keydso cows-ka oo ka kooban 5 qaado oo ah dufan duurjoog ah, 10 qaado oo ah xididka Althea, 10 qaado oo koofiyad. Geedka oo dhan waa la isku qasan yahay, qaado 2 qaado oo ka mid ah ururinta, ku shub biyo karkaraya oo ka bax inaad u jeermiso 30 daqiiqadood. Qaado 0.5 koob oo faleebo 5 - 6 jeer maalintii 20 daqiiqo cuntada ka hor.
Si loo yareeyo xaaladda bukaanka qaba neefta neefta waxaad u baahan tahay inaad diyaariso ururinta oo ka kooban 200 g oo geedo duurjoogta duurjoogta ah, 200 g oo ah ubaxyo chamomile ah, 60 g oo ah buro bjørk iyo 40 g geedka efedra. Brew 2 qaado oo ka mid ah ururinta 500 ml oo biyo ah karkaraya oo u diyaargarow 5-6 saacadood, ka dibna cadaadis. Cab cabitaan 3 jeer maalintii 0.5 galab 30 daqiiqo ka hor cuntada.
Uruurinta iyo kaydinta alaabta ceeriin
Iyadoo ujeedada daaweynta ay isticmaalaan caleemaha caleemaha dhalinyarada ah ee duurjoogta duurjoogta ah, oo aan weli lignified. Qaadidda alaabta ceeriin ee caansaan ah waxaa la fuliyaa dhammaadkii Agoosto ama horraanta Sibtambar inta lagu guda jiro xilliga Bisaylkiisa miro. Marka ururinta caleemaha dhererkoodu yahay 10 sm oo gacanta laga gooyo ama jarjaro.
Laamaha qalajinta waxaa lagu sameeyaa qulqulka ama hooska waddada, meelaha hawo wanaagsan leh. Qalabka korontada waxaa loo isticmaali karaa in lagu qalajiyo dhirta, qalabkana waa in aan lagu beddelin 40 ° C.
Marka qalajinta dufanka duurjoogta ah waxaa lagama maarmaan ah in si gaar ah loo taxadaro, sida dhirtu u tahay sun, iyo haddii aad joogtid cawska oo dhan mar walba, taasi waxay kuu keeni kartaa madax xanuun aad u daran.
Marka ururinta iyo qallajinta cawska, dhammaan manuucyada waa in lagu sameeyaa maskaxda ama dharka faashadda. Waxyaabaha qashinka waxaa lagu kaydiyaa bacaha warqadaha ama dhalooyinka.
Daaweynta duurjoogta duurjoogta ah waa in lagu sameeyaa kormeerka dhakhtarka, maaddaama faa'idooyinka qaadashada ay tahay in loo baahdo in lala xariiriyo khilaafka, taas oo lagu sharraxayo joogitaanka walxaha sunta ah ee ka kooban.
Waa muhiim! Daaweynta duurjirta duurjoogta ah waa in la sameeyaa kaliya ogolaanshaha dhakhtarka, sababtoo ah xaaladaha qaarkood dhirta waxay sababi kartaa raaxo daran. Isticmaalka dufanka duurjoogta ah ee qiyaasta ka baxsan xeerka waa la mamnuucay, maaddaama ay sababi karto madax xanuun iyo xanaaq badan oo xanaaq badan.
Intaa waxaa dheer, inkasta oo ay jirto karti daaweyn sare, isticmaalka duurjoogta duurjoogta ah waa la mamnuucay haddii ay dhacdo jirro maskaxeed, maskax ahaan shucuur, qotodheer, xajmiga, iyo u ekaanshaha joojinta neefsashada.
Dabcan, rosemary duurjoogta ah waa warshad sun ah, laakiin ka hor inta aanad xasuusanayn, ka fakir cudurada ay kaa caawin karto si aad uga takhalusto.